YouTube စတားတွေ ထိုးကြတဲ့ ဗြိတိန်ရဲ့ အကြီးမားဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ လက်ဝှေ့ပွဲ
6 Feb 2018 . 4:17 PM
ဗြိတိန်မှာ အကြီးဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ ဘောက်ဆင်ပွဲဟာ လက်ဝှေ့သမားတွေ ထိုးတာ မဟုတ်ဘဲ YouTube က Vloggers တွေ ထိုးတာဆို ယုံကြမလား။ ဒါက တကယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Social Media Stars တွေလည်း ဖြစ်၊ YouTube မှာ ပရိသတ်အခိုင်အမာလည်း ရနေတဲ့ KSI နဲ့ Joe Weller တို့ နှစ်ယောက်က ပရိသတ် ၈ ထောင်ရဲ့ ရှေ့မှာ ဘောက်ဆင်ယှဉ်ထိုးပြီး Live လွှင့်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီ Live Stream Video ကို ကြည့်တဲ့အကြိမ်အရေအတွက်ဟာ မကြုံစဖူး ထူးထူးကဲကဲ ကြည့်ရှုတဲ့ အကြိမ်ရေသန်း (၂၀) ကျော်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုသူအရေအတွက် (Viewers Count) ဟာလည်း ၁.၅ သန်းကျော်ပြီး ဒါဟာ ဝင်ဘယ်လ်ဒန် တင်းနစ်ပွဲနဲ့ FA Cup Finals ပွဲစဉ်တွေထက် ကြည့်သူအရေအတွက် သာလွန်သွားခဲ့တာပါ။
ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Social Media ဟာ လူမှုကွန်ရက်တွေအပေါ် ဘယ်လောက်တောင် လွှမ်းမိုးထားနိုင်လဲဆိုတာ မြင်သာပြီး ပွဲလက်မှတ်တွေဟာဆိုရင်လည်း လက်မှတ်တစ်စောင်ကို ၆၆ ပေါင် (၉၃. ၅၇ ) ဒေါ်လာလောက်ကို ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ လောင်းကြေးတွေဟာဆိုရင်လည်း သောကြာနေ့မတိုင်ခင်အထိကို ပေါင်တစ်သိန်းလောက်ထိ ဝိုင်းတင်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Joe Wellers ရော KSI ရောဟာ သူတို့ရဲ့ Video Game Reviews တွေ၊ Vloggingတွေနဲ့ သူတို့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေမှာ အသီးသီးနာမည်ကြီးကြသူတွေပါ။ သူတို့ရဲ့ ထိုးပွဲကို လန်ဒန်အိုလံပစ်ပန်းခြံက Copper Box အားကစားရုံမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်၊ စနေနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲမစခင်မှာလည်း သူတို့ အချင်းချင်းရော၊ နှစ်ဘက်ပရိသတ်တွေကရော အပြန်အလှန်လေတိုက်ခဲ့ကြပြီး နာမည်ကြီး Betting ဖြစ်တဲ့ William Hill ကလည်း ဒီပွဲအတွက် ကြေးဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပရိုလက်ဝှေ့သမားတွေကတော့ ဒီပွဲကို ပေါ်ပင်လုပ်ရပ်ဆိုပြီး ရှုံ့ချခဲ့ကြပါတယ်။
ပွဲရဲ့ ရလဒ်ကတော့ KSI က Joe Weller ကို တတိယအချီမှာ TKO (Technical Knockout) နဲ့ အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲအပြီးမှာတော့ Weller က Instagram မှာ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး KSI ရဲ့ အနိုင်ပွဲဟာ ထိုက်တန်ပါတယ်လို့ ဂုဏ်ပြုစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။
Joe Weller က IG မှာ ဓာတ်ပုံတင်ပြီး KSI ကို ဂုဏ်ပြုစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ရူးပေါက်လို့ပဲ ထိုးထိုး၊ Followers များချင်လို့ပဲ ထိုးထိုး သူတို့ရဲ့ ပွဲကတော့ တကယ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး Joshua နဲ့ Klitschko ပွဲအပြီးတည်းက အကြီးမားဆုံး Live ကြည့်တဲ့ ပရိသတ်ကို ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဒီလို လူကြည့်များတဲ့ လက်ဝှေ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်အောင် ဘယ် Social Media Stars တွေ ပွဲဆိုင်ပေးလို့ ရလောက်မလဲဆိုတာ အပျော်စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့။
YouTube စတားတှေ ထိုးကွတဲ့ ဗွိတိနျရဲ့ အကွီးမားဆုံးဖွဈသှားတဲ့ လကျဝှပှေဲ့
ဗွိတိနျမှာ အကွီးဆုံးဖွဈသှားတဲ့ ဘောကျဆငျပှဲဟာ လကျဝှသေ့မားတှေ ထိုးတာ မဟုတျဘဲ YouTube က Vloggers တှေ ထိုးတာဆို ယုံကွမလား။ ဒါက တကယျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ Social Media Stars တှလေညျး ဖွဈ၊ YouTube မှာ ပရိသတျအခိုငျအမာလညျး ရနတေဲ့ KSI နဲ့ Joe Weller တို့ နှဈယောကျက ပရိသတျ ၈ ထောငျရဲ့ ရှမှေ့ာ ဘောကျဆငျယှဉျထိုးပွီး Live လှငျ့ခဲ့ကွပါတယျ။
အဲဒီ Live Stream Video ကို ကွညျ့တဲ့အကွိမျအရအေတှကျဟာ မကွုံစဖူး ထူးထူးကဲကဲ ကွညျ့ရှုတဲ့ အကွိမျရသေနျး (၂၀) ကြျောပါတယျ။ ကွညျ့ရှုသူအရအေတှကျ (Viewers Count) ဟာလညျး ၁.၅ သနျးကြျောပွီး ဒါဟာ ဝငျဘယျလျဒနျ တငျးနဈပှဲနဲ့ FA Cup Finals ပှဲစဉျတှထေကျ ကွညျ့သူအရအေတှကျ သာလှနျသှားခဲ့တာပါ။
ဒါကို ကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ Social Media ဟာ လူမှုကှနျရကျတှအေပျေါ ဘယျလောကျတောငျ လှမျးမိုးထားနိုငျလဲဆိုတာ မွငျသာပွီး ပှဲလကျမှတျတှဟောဆိုရငျလညျး လကျမှတျတဈစောငျကို ၆၆ ပေါငျ (၉၃. ၅၇ ) ဒျေါလာလောကျကို ပေါကျခဲ့ပါတယျ။ လောငျးကွေးတှဟောဆိုရငျလညျး သောကွာနမေ့တိုငျခငျအထိကို ပေါငျတဈသိနျးလောကျထိ ဝိုငျးတငျထားကွပွီးဖွဈပါတယျ။
Joe Wellers ရော KSI ရောဟာ သူတို့ရဲ့ Video Game Reviews တှေ၊ Vloggingတှနေဲ့ သူတို့ အသိုငျးအဝိုငျးတှမှော အသီးသီးနာမညျကွီးကွသူတှပေါ။ သူတို့ရဲ့ ထိုးပှဲကို လနျဒနျအိုလံပဈပနျးခွံက Copper Box အားကစားရုံမှာ ဖဖေျောဝါရီလ ၃ ရကျ၊ စနနေကေ့ ပွုလုပျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ပှဲမစခငျမှာလညျး သူတို့ အခငျြးခငျြးရော၊ နှဈဘကျပရိသတျတှကေရော အပွနျအလှနျလတေိုကျခဲ့ကွပွီး နာမညျကွီး Betting ဖွဈတဲ့ William Hill ကလညျး ဒီပှဲအတှကျ ကွေးဖှငျ့ပေးခဲ့ပါတယျ။ ပရိုလကျဝှသေ့မားတှကေတော့ ဒီပှဲကို ပျေါပငျလုပျရပျဆိုပွီး ရှုံ့ခခြဲ့ကွပါတယျ။
ပှဲရဲ့ ရလဒျကတော့ KSI က Joe Weller ကို တတိယအခြီမှာ TKO (Technical Knockout) နဲ့ အနိုငျယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပှဲအပွီးမှာတော့ Weller က Instagram မှာ ဓာတျပုံတဈပုံတငျခဲ့ပွီး KSI ရဲ့ အနိုငျပှဲဟာ ထိုကျတနျပါတယျလို့ ဂုဏျပွုစကားဆိုခဲ့ပါတယျ။
Joe Weller က IG မှာ ဓာတျပုံတငျပွီး KSI ကို ဂုဏျပွုစကားဆိုခဲ့ပါတယျ။
စိတျရူးပေါကျလို့ပဲ ထိုးထိုး၊ Followers မြားခငျြလို့ပဲ ထိုးထိုး သူတို့ရဲ့ ပှဲကတော့ တကယျအောငျမွငျခဲ့ပွီး Joshua နဲ့ Klitschko ပှဲအပွီးတညျးက အကွီးမားဆုံး Live ကွညျ့တဲ့ ပရိသတျကို ရရှိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး ဒီလို လူကွညျ့မြားတဲ့ လကျဝှပှေဲ့တဈပှဲဖွဈအောငျ ဘယျ Social Media Stars တှေ ပှဲဆိုငျပေးလို့ ရလောကျမလဲဆိုတာ အပြျောစဉျးစားမိတယျပေါ့။